तराईदेखि पहाडसम्मै डेंगु संक्रमण : राजधानीसमेत जोखिममा, डाक्टर-नर्स पनि संक्रमित spacekhabar
तराईदेखि पहाडसम्मै डेंगु संक्रमण : राजधानीसमेत जोखिममा, डाक्टर-नर्स पनि संक्रमित लामखुट्टेबाट सर्ने डेंगु हाम्रै हेलचेक्रयाइँले सर्छ । मानव स्वास्थ्यमा निकै जोखिम मानिने डेंगुको संक्रमणबाट जोगिन केही सावधानी त पक्कै पनि अपनाउनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ ।
स्पेसखबर काठमाडौँ, १९ भदौ
बर्खाको मौसम । अहिले देशभर विभिन्न रोगको संक्रमण देखिएको छ । सर्पदंश, झाडापखाला, ज्वरोसँगै डेंगुका रोगी पनि बढ्दै गएको पाइएको हो ।
उसो त यो वर्ष गत वैशाखमा सुनसरीको धरानमा पहिलोपटक डेंगुको संक्रमण भएको पत्ता लागेको थियो । अहिले भने देशभर फैलिएको अवस्था छ । अझ राजधानी उपत्यका पनि डेंगुको उत्तिकै जोखिममा रहेको छ ।
चिकित्सकहरुका अनुसार ज्वरो आएर अस्पताल जाने आधाजति बिरामीमा डेंगु संक्रमण देखिएको छ । पछिल्लो समय मुलुकका झन्डै ४२ जिल्लामा डेंगु संक्रमण फैलिइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको आंकडा छ ।
ज्यानमारा रोग नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मुलुकका डेंगु जोखिम मानिएका क्षेत्रमा औषधिसमेत छरिरहेको छ । डेंगुको जोखिम बढेसँगै नियन्त्रणका लागि पनि सरोकारवाला निकाय त क्रियाशील बनेका छन् । तर, हाम्रो घरवरपर सरसफाइमा पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको चिकित्सकहरु बताउँछन् । यस्तै मन्त्रालयले नै सरोकार सबै पक्ष मिलेर डेंगुविरुद्ध अभियान चलाउन आह्वान नगरेको पनि कहाँ हो र ? तर, जोखिम घट्नुको साटो दिनानुदिन बढिरहेको अवस्था छ ।
उता पर्यटकीय सहर पोखराको अवस्था पनि जोखिम पूर्ण छ । झन्डै हरेक दिन डेंगुका नयाँ बिरामी उपचारका लागि अस्पताल पुग्न थालेका छन् । बिरामीको भीड बढेर यहाँका अस्पतालमा बेड अभाव भएका छन् । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कास्कीका अनुसार झन्डै साढे ५ सयमा जनामा डेंगुको संक्रमण देखिएको छ । कार्यालयका भेक्टर कन्ट्रोल निरीक्षक याम बरालका अनुसार संक्रमितमध्ये ८ ट्राफिक प्रहरी र ५ स्वास्थ्यकर्मी पनि छन् ।
पोखरा महानगरपालिकाको ३३ मध्ये २७ वटा वडामा डेंगु संक्रमण देखिएको छ । खुला स्थान र पानी जम्ने ठाउँ पर्याप्त भएको र मान्छेको आउजाउ बढी हुने क्षेत्र भएकाले पनि डेंगु संक्रमण बढिरहेको चिकित्सकहरुको भनाइ छ । यस्तै कबाडी संकलन केन्द्र तथा सर्वसाधारणका घरमा रहेका पुराना भाँडामा जम्मा भएको पानीबाट डेंगु संक्रमण देखिएको हो ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार गण्डकी प्रदेश पनि डेंगुको उच्च जोखिममा रहेको छ । तनहुँका व्यास नगरपालिका र म्याग्दे गाउँपालिकामा पनि डेंगुका बिरामी देखिएका छन् । यस्तै गण्डकी प्रदेशका झन्डै हजार बढीमा डेंगुको संक्रमण देखिएको छ । सबैभन्दा बढी कास्की, पर्वत, बागलुङ, तनहुँ, लमजुङ, स्याङ्जामा तथा गोरखामा डेंगु संक्रमित भेटिएका छन् ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका स्वास्थ्य अधिकृत पार्थमणि न्यौपानेले गत वर्षभन्दा यसवर्ष चार दोब्बर डेंगुको बिरामी भेटिएको बताए । उनका अनुसार गत वर्ष ३ जनामा मात्रै डेंगु देखिएको र यस वर्ष संक्रमण बढेपछि जिल्लाका सबै स्वास्थ्य चौकी, नगर जनस्वास्थ्य चौकी र सञ्चारमाध्यममार्फत जनचेतना फैलाउने अभियान आरम्भ गरिएको छ ।
अझैं दुई महिना डेंगु संक्रमणको जोखिम !
प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ १९, २०७६, ०८:४२:००